Harry Kane Oo Gool Loogu kordhiyey tiradiisii Si Ugu Soo Dhowaado Mohamed Salah | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Harry Kane Oo Gool Loogu kordhiyey tiradiisii Si Ugu Soo Dhowaado Mohamed Salah
Published on April 12, 2018 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(12-4-2018) Maamulka horyaalka kubadda cagta waddanka Ingiriiska ayaa shaaciyey in gool lagu kordhiyey tirada goolasha uu haystay Harry Kane.
Tottenham ayaa rafcaan ka qaadatay laba gool iyo hal ay Sabtidii kaga badisay Stoke City oo loo qoray Eriksen, waxaana ay ku doodday inuu kubadda sii taabtay Harry Kane, isla markaana ay tahay in magaciisa lagu qoro.
Arrintan oo u muuqata in Tottenham ay doonayso in Kane uu gool dhalinta kula tartamo Mohamed Salah oo dhaliyey 29 gool horyaalka Premier League iyo Kane oo 25 ay noqotay tirada goolashiisu marka lagu daro goolka loogu kordhiyey, ayaa waxa jawaab ka bixiyey Salah oo bartiisa Twitterka ku qoray ereyo kooban oo uu ku muujinayo inay layaab ku tahay go’aankani.
Maamulka kubadda cagtu waxay ku doodeen in markii ay dib u daawadeen ay arkeen goolka uu dhaliyey Kane, sifo khaldanna loogu diiday.
Siduu u dhacay go’aanku
Guddi saddex xubnood ka kooban ayaa ka fadhiistay cabashaii ay Tottenham usoo gudbisay, waxaanay dib u daawadeen muuqaalka goolkii, waxaanay ku qanceen in Harry Kane uu goolkaas dhaliyey, sidaas daraadeed ayaanay usoo saareen go’aanka oo dhaqangal noqday.
Mohamed Salah ayaa bartiisa Twitterka ku shaaciyey inay layaab tahay arrintani.
Qoraal kooban oo uu soo dhigay ayaa waxa uu ku yidhi sidan: “WOOOOOOOOOOOOOW Ma run baa.”
Dhaartii Harry Kane
Harry Kane ayaa ku dhaartay inuu isagu goolka dhaliyey mar wax laga weydiiyey, waxaanu yidhi: “Nolosha gabadhayda yar ayaan ku dhaartaye, kubadda waan sii taaabtay.”
Jawaabaha layaabka leh ee bannaanka:
Ciyaaryahannadii hore ee xulka qaranka England ee Alan Shearer iyo Gary Lineker ayaa layaab ku tilmaamay go’aankan, waxaanay iyagoo riwaayadsanaya sheegeen in goolal badan oo ay dhaliyeen la siiyey ciyaaryahanno kale, balse haddii ay wakhtigan ahaan lahayd ay yeelan lahaayeen.